(Dhagayso) Siyaasi Siciid Sanwayne Iyo Wasiir Soocade oo is haysta Doodii Maanhadal – Radio Daljir
Febraayo 12, 2016 8:43 b 0
Garowe, 12, Ferbu, 2016 – Siciid Sanwayne oo ah Guddoomiyaha Urur Siyaasadeed-ka Udud ee Puntland ayaa Puntland ku eedeeyay in ay ku fashilantay Siyaasadii, waxaana uu doodiisa tusaale uga dhigay hab-qaybsiga beelaha Puntland.
Siciid oo u waramay Barnaamijka Maanhadal ee Radio Daljir ayaa sidoo kale waxaa uu Xukuumadda Puntland ku dhaliilay in Issimadu la kulmaan Beesha Caalamka.
Dhinca kale – Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Xassan Soocade ayaa eedaynta Siciid Sanwayne ku tilmaamay mid aan garowshiyo laga bixin-karin, waxaa uu wasiirku Siciid ku eedeeyay in uu la fikir yahay Madaxda Dawladda Federaalka, wuxuu ugu baaqay in uu iimaan-sado dhulkiisa iyo dadkiisa, damaciisa siyaasadeed-na uu caqli ku daro.
Hoos ka dhagayso codkii Siciid Sanwayne iyo Soocade oo u jawaabay.
(Dhagayso Dood) Barnaamijkii Maanhadal oo ku saabsan Shirarkii Puntland iyo Beesha Caalamka ee fashilmay